Uru nke iji netwọkụ mmekọrịta maka Ecommerce azụmaahịa gị | ECommerce ozi ọma
Uru nke iji netwọkụ mmekọrịta maka Ecommerce azụmaahịa gị
Susana Maria Urbano Mateos | | eCommerce, Nche
Ihe ntanetị mmekọrịta na-enye nnukwu ohere maka azụmahịa gị azụmahịa e-commerce nwere ike ime ka ọnụ ahịa ndị ahịa gị bawanye, ịmụtakwu banyere àgwà ịzụ ahịa ha ma mekwaa iguzosi ike n'ihe. Ọzọ anyị ga-ekwu maka uru dị na ya jiri netwọkụ mmekọrịta maka ecommerce azụmaahịa gị.
1 Ndị ahịa
El jiri netwọkụ mmekọrịta na-enye gị ohere ịbawanye ndị ahịa gị site na iwulite ọnụnọ n'ịntanetị. Ọbụghị naanị nke ahụ, mkpọsa ahịa gị nwere ike ịgụnye ndị na-ege gị ntị ị na-agaghị enweta ma ọlị site na mgbasa ozi mpaghara.
Ọzọ nke uru nke netwọkụ mmekọrịta maka ecommerce bụ na ị nwere ike iji ọnụnọ nke akara gị ka ndị ahịa gị na ụmụazụ gị mara ihe azụmahịa gị gbasara. Mgbe ị nyere ha nnukwu ọdịnaya, ndị na-eso ụzọ gị nwere ike ịkekọrịta ihe akara gị na ndị enyi na ezinụlọ ha. N'aka ozo, soshal midia na enye ahia gi ezi okwu.
Jiri Enwere ike iji netwọkụ mmekọrịta kpọsaa ọkwa na onyinye pụrụ icheNa mgbakwunye, ịnwere ike iji ọdịnaya dị n'ịntanetị mee ka ndị na-ege gị ntị mara karịa akụkụ nke ika gị. Nke ahụ bụ, ọdịnaya nwere ike inyere gị aka ịmepụta njikọ gị na ndị ahịa gị, bulie ndị na-azụ gị ahịa yana iguzosi ike n'ihe nye akara gị.
El Ecommerce nwekwara ike irite uru site na mgbasa ozi site na nsonye na mmekọrịta nke ndị ahịa. Netwọk mmekọrịta ndị a na-enye gị ohere ịza ajụjụ, ntụnye, arịrịọ ma kenye obi abụọ gbasara azụmahịa gị. Nke a nwere ike inyere gị aka ịchọta ụdị ngwaahịa ndị ahịa gị nwere ike ịchọ.
Site na mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ịdabere na iche iche igwe mmadụ nke mere na e gosipụtara ngwaahịa ndị ahụ kpọmkwem nye ndị na-ege ntị ịchọrọ. Site na ichota otu ndi nwere ike inweta ahia, inwere ike inweta otutu uru n’ime ahia ahia gi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Nche » Uru nke iji netwọkụ mmekọrịta maka Ecommerce azụmaahịa gị
Kedu ọrụ ọrụ njikwa ahịa dijitalụ gụnyere?
CRM: Njikọ Mmekọrịta Omenala